Dhageyso Faahfaahin Laga Helayo Weerarka Fashilmay Ee Deegaanka Mubaarak. – Calamada.com
Dhageyso Faahfaahin Laga Helayo Weerarka Fashilmay Ee Deegaanka Mubaarak.
calamada September 12, 2018 1 min read
Ciidamo American ah iyo maleeshiyaat Murtadiin ah ayaa xaley duullaan dheelmad ah ku soo qaaday deegaanka Mubaarak ee wilaayada Sh/hoose, Iyagoona Allaah fadligii ku jabay kuna fashilmay weerarka ay ku soo qaadeen deegaankaasi.
Ciidamadan oo ka koobnaa dhowr unug ayaa ku yimid diyaarado Hilicoptaro ah kuwaas oo ku daadiyey afaafka hore ee deegaanka, ka dibna waxay u soo dhaqaaqeen dhanka magaalada si ay halkaas kaga geystaan falal arbushaad ah oo ka dhan ah dadka deegaanka.
Mujaahidiitan oo horay u sii hayey xogta cadowga ayaa ciidamo xoogan ku diyaariyey wadooyinka laga soo galo magaalada si loo fashiliyo duullaanka cadowga, nabar culusna loo gaarsiiyo.
Saraakiisha Mujaahidiintu waxay noo sheegeen in ciidamada saliibiyiinta iyo kuwa murtadiinta ay ku dhaceen kamiin ku diyaarsanaa mid ka mid ah wadooyinkii ay soo marayeen taas oo keentay inuu halkaas ku qabsado dagaal xoogan iyagoo aanan soo galin magaalada.
Halkan Ka Dhageyso Faahfaahinta.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo.02-01-1440 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 02-01-1440 Hijri.